Irayisi omelette zokupheka: isitayela saseJapan, esinoshizi, kubhakwe nokuningi! | Ukupheka Kwekhishi
USusana godoy | | Okufakiwe Okushisayo, General, Ukupheka Okukhethekile, Ukupheka Okulula
Uke wazama i-omelette yelayisi? Kunezinhlobo eziningi ze-tortilla, amazambane, imifino, i-tuna, i-ham kanye noshizi njll
Kepha namhlanje ngikulethela okungajwayelekile, irayisi omelette ocebile. Yebo, njengoba uyifunda, Ilayisi omelette futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi limnandi.
Ngesikhathi sokuqala ngibona le omelette yelayisi, yayisencwadini yokupheka futhi nginqume ukuyizama ngenxa yelukuluku, manje ingenye yezindlela engithanda kakhulu ukudla irayisi.
Ngesikhathi sokuqala engayibona ngayo, kwakusencwadini yokupheka futhi nginqume ukuyizama ngenxa yelukuluku, manje sekwenzekile enye yezindlela engithanda kakhulu ukudla ilayisi. Izithako zinengqondo futhi isikhathi silungile ukuthi sidle kahle.
Ukucaciswa kulula, nje kufanele sipheke irayisi, njengoba sihlala senza. Emanzini abilayo, usawoti kanye namaconsi ambalwa kawoyela, yindlela engikwenza ngayo, kwesinye isikhathi ngifaka i-clove kagalikhi. Lapho sinelayisi elibilisiwe, siyalihluza bese siyaligcina.
Sibeka ipani elinamafutha amancane okuzoshisa, ngenkathi sishaya amaqanda ambalwa (ngenza ama-omelette elayisi ngamanye). Uma sinamaqanda sifaka ingcosana kasawoti kanye nepelepele elayisi. Sikuxuba konke. Uma sine-pan eshisayo, singakwazi uthele ingxube epanini ukuze i-omelette yenziwe.
Siyiyeka ibe nsundu nhlangothi zombili, siyiphendule uma isithinta futhi siyisuse lapho sibona ukuthi isilungile.
Ngokunengqondo, ngayinye inephuzu lokuphekela ama-tortilla, noma ngabe lenziwe kahle, neqanda liye eqophelweni, njll. Ungalandela inqubo efanayo ye-omelette yelayisi. Ngingakufisela inhlanhla kuphela futhi ngiphawule ongakwenza engeza u-anyanisi omncane noma ngisho nokuthinta i-chorizo.
Futhi uma unelayisi elisele, unganqikazi ukusizakala ngalo ukwenza ilayisi amakhekhe, iresiphi elula kakhulu emnandi.
1 I-omelette yelayisi yaseJapan
1.1 Izithako zabantu ababili
2 Ilayisi noshizi omelette
3 Ungalisebenzisa irayisi elinsundu?
4 Uyenza kanjani i-omelette yelayisi ebhakwe
4.1 Izithako zabantu abangu-4
I-omelette yelayisi yaseJapan
Ukuhlanganiswa kwalokho esikwaziyo njenge-omelette nelayisi elithosiwe, kusishiyela isidlo esilula, esisheshayo futhi esiphundu. Ezindaweni zaseKorea naseTaiwan kuvame kakhulu ukuyithola. Ngokubanzi, singayichaza njengelayisi elenziwe ngenkukhu noma imifino futhi elisongwe ngongqimba lwe-omelette yaseFrance. Ingabe lokho akubonakali kuwumqondo omuhle kuwe?
Izithako zabantu ababili
1 ingilazi yelayisi
Izingilazi ezingama-2 zamanzi
150 amagremu webele lenkukhu
Upelepele obomvu noluhlaza okotshani
Okokuqala sipheka irayisi ngamanzi nosawoti omncane. Ngakolunye uhlangothi, sizosika kahle isifuba senkukhu. Sizokwenza okufanayo nopelepele no-anyanisi. Sizobeka ipani lokuthosa emlilweni ngesipuni samafutha bese sibeka brown izithako zangaphambilini. Lapho ilayisi liphekiwe, siyifaka epanini. Sizoshiya imizuzu embalwa ngenkathi sishukumisa ukuze ama-flavour ahlangane. Sifaka usosi omncane katamatisi. Kwelinye ipani, sizokwenza njalo ama-omelette aseFrance. Zizoba ngamaqanda amabili kwamabili lilinye. Uma sezikulungele, engeza ingxube yelayisi bese uvala ukubamba ngokucophelela. Ungahlobisa ngaphezulu ngenye ingcezu katamatisi isosi futhi ulungele ukunambitha.
Ilayisi noshizi omelette
Uma kunerayisi elisele, okuqinisekile ukuthi livamile, akukho okufana nokuligcina likwazi ukwenza iresiphi ibe mnandi njengale. Kulokhu sikhethe i-omelette yelayisi noshizi. Inhlanganisela ekhethekile ongeke uyiphuthe.
Ipuleti lelayisi eliphekiwe
Amaqanda ama-3 aphakathi nendawo
3-4 izingcezu zoshizi we-mozzarella
4 wezipuni zikashizi ogayiwe
Okokuqala kufanele uhlanganise irayisi namaqanda, kuze kuhlanganiswe ngokuphelele. Sifaka ipani lokuthosa emlilweni ngesipuni samafutha. Kuyo sizofaka uhhafu wengxube futhi sizoyivumela ukuthi yenziwe imizuzu embalwa. Ngenkathi, Sizongeza izingcezu zeshizi kanye ne-grated noma lowo omkhethele umcimbi. Manje yisikhathi sokumboza lonke ushizi ngenye ingxenye yenhlanganisela. Njenganoma iyiphi i-tortilla, idinga ukuthi siyiphendule futhi sizoyishiya eminye imizuzu emibili noma emithathu eyengeziwe.
Ungalisebenzisa irayisi elinsundu?
Ukuze ukwazi ukwenza lezi zinhlobo zokupheka lapho i-rice omelette ingumqondo oyinhloko, ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lwalo mkhiqizo. Lokho okungukuthi, ilayisi elimhlophe nelayisi elinsundu, okusanhlamvu okude ngisho namakha amnandi. Zonke zizohlanganiswa ngokuphelele lapho kwenziwa izitsha ezifana nalezi. Vele, esimweni se- irayisi elinsundu singaba ne- isidlo esinempilo kakhulu, ene-fiber eningi namavithamini. Ngaphezu kwalokho, amaqanda azongeza amaprotheni futhi uma lokho bekunganele, singahlala njalo sengeza imifino.
Uyenza kanjani i-omelette yelayisi ebhakwe
Uma kufanele ulungise isidlo esihluke kancane, bese ukhetha le omelette yelayisi ebhakwe. Yebo, ngoba singasebenzisa futhi i-ovini ukwenza ifayili le- isidlo esilula nesidala kanje. Bhala phansi kanjani!
Izithako zabantu abangu-4
400 gr welayisi eliphekiwe
200 gr ka-anyanisi
200 gr kapelepele
300 gr wamatamatisi
100 gr ushizi
Isipuni esingu-1 samafutha
Usawoti kanye ne-oregano
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi ungahlala ushintsha upelepele noma utamatisi nge-tuna encane noma esinye isithako osithanda kakhulu. Lokho kusho ukuthi sishisa uhhavini uye ku-170º. Sisika kokubili utamatisi, upelepele no-anyanisi. Sizifaka epanini lokuthosa elinamafutha amancane kakhulu. Sibashiya imizuzu embalwa bese sisusa ukuxuba nelayisi elizobe seliphekiwe. Kule ngxube sifaka ingcosana kasawoti, izinongo ezinjenge-oregano namaqanda ashaywayo. Lapho konke kuxubeke kahle kuzofanele sikwenze uthele esitsheni sokubhaka, ngaphambili wagcotshwa ngamafutha amancane. Sizoyivumela ipheke cishe imizuzu engama-25. Kepha qaphela, ihhavini ngalinye lihlukile, ngakho-ke kuzofanela uhlole ukuthi ingxenye ephezulu iqinile yini ukuthi yenziwa. Uma sesisusile esihlonipheni, sibeka ushizi kuso. Into enhle kuleli cala ukuthi yizicucu, kepha futhi ungangeza ushizi omncane ogayiwe. Ukushisa okunikezwe yi-rice tortilla kuphela lapho ushizi uzoncibilika khona. Lapho lifudumele kancane, singalivulela izinyo.
Njengoba ukwazi ukubona, i-omelette yelayisi isidlo esiphelele impela. Ngakolunye uhlangothi, kuyinto elula ukuyenza. Into ezokhanga bobabili abadala nezingane endlini. Ngakolunye uhlangothi, kuyisisekelo ukukwazi ukukwenza ukusizakala ngokudla njengelayisi esisele nalo. Sebenzisa ngokunenzuzo!.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Ilayisi Omelette
UDaniela dal farra kusho
Kungenziwa futhi nge-pasta. Ngenza i-pasta omelette uma nginokuthile okusele ngemuva kokudla kwasemini, ngakho angikulahli!
Phendula uDaniela Dal Farra
idwala le-rocio kusho
okuhle akuvamile kepha ngizozama futhi ngidinga iresiphi yokupheka
Phendula edwaleni le-rocio
Kungokokuqala ngqa ukuthi ngikwenze, ngizokutshela uma
Siyabonga ngokusifunda futhi uma usilungiselela, silindele umbono wakho.
Ngiyabonga! Ngikwenzile namhlanje futhi bekulungile 😀 imikhonzo
Ngisanda kukwenza ... Kepha ngishintshe izithako ezithile ... I-Rikisiiiimooo ngiyithandile nezivakashi zami bezingajabuli ..
Babengibheka kahle jaajajajajajjajajajajajjajaaj …………………………………. 😀
Ngihlala ngimuhle ngama-hellmans amancane ...
Futhi uyazi kusho
Ngizoyilungiselela nje, kepha kubukeka kukuhle. : v
Phendula uYa uyazi
Lokho ebengikufuna nje, bengingazi ukuthi ngenza kanjani i-rice omelette, namhlanje ngiyilungisile bese ngizokutshela ngayo. Ngibonga kakhulu!!!
Ngisanda kwenza eyodwa, ngeza iparsley noshizi, izame
Ngidle i-omelette yelayisi kusukela ngisemncane. Umama wenza irayisi ngezingcezu zenyama yesanqante, kwesinye isikhathi uphizi ... ungafaka namaqabunga ambalwa eparsley ukuze uthinte ingxube neqanda ... ...
Amathuba amahle kakhulu okwenza ama-rice tortilla
luis gonzalo valverde kusho
Ngibonga kakhulu ngokusinika enye indlela yokusebenzisa leli layisi. Ngithatha leli thuba ukunibingelela futhi nginifisela unyaka omusha omuhle. Mayelana
Phendula ku-luis gonzalo valverde
U-Elida Esther kusho
Bangisize kakhulu kwazise ngipheke irayisi elinsundu kakhulu futhi bengingazi ukuthi ngenzeni izinkulungwane zamahora.
Phendula u-Elida Esther